RW Cumar Cabdirashiid oo Maanta Booqday Qaxootiga Yemeniyiinta ah ee ku sugan Qardho – Radio Daljir
Luulyo 18, 2015 6:17 b 0
Sabti, Luuliyo 18, 2015 (Daljir) —Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmarke oo maalintii labaad ku sugan magalada Qardho ayaa maanta oo Sabti ah booqday Jaamacadda Bariga Africa oo ay si KMG ah u degan yihiin dadka kasoo cararay dagalada Yaman oo isla dalkaasi u dhashay.
Waxaa ku weheliya Sharmarke booqashadiisa Qaxootiga Yaman wasiirka Dastuurka.Xildhibaanadii la socday, mamulka Gobalka iyo kan degmada Qardho waxayna ka xog waraysteen xaalada dadkan siday tahay Shiikh Cabdiqaadir Yaasiin oo xaruntan mamula.
Qaxootigan oo qof ka mid ah u hadlay ayaa ka waramay baahiyaha muuqda ee u baahan in wax laga qabo.wuxuna sheegay inaysan haysan meel ay deegaan caadi ah ka dhigtaan maadama Jaamacadda furitaankeedii ay soo dhow dahay, mamulka Degmada ayaa dhul ugu deeqay hase yeeshee dhulkaas ayaa ah mid aan dhisnayn una baahan in loo dhiso oo loo qalabeeyo.
Wasiirka koowaad ee dalka ayaa marka hore Qaxootiga Yaman u sheegay inuu ka xun yahay dagalada ka socda dalka Yaman oo ay Soomaaliya walaalo daris ah yihiin, waxa uu sheegay iyagoo kaa shanaya Puntland inay wax ka qaban doonaan xaalada ay ku sugan yihiin Qaxootiga Yaman oo hadda u baahan rasmi ahaan meel ay degaan.
Dadka degan halkaa ayaa tiradoodu gaaraysaa afar boqol oo qof, waxayna qayb ka ahaayeen Qaxootigii faraha badnaa ee kasoo cararay dalka Yaman.